Deg Deg Daawo:Isticmaalka Baasaboorka Somalia Oo La Hakiyay. – KHAATUMO NEWS
Deg Deg Daawo:Isticmaalka Baasaboorka Somalia Oo La Hakiyay.
Waxaa mudo todobaad ah oo ka billaabanaysa 14-ka bishan la hakiyay dalbashada baasaboorka Soomaaliya.
War kasoo baxay heyadda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaliya ayaa lagu sheegay in loo hakiyay arrimo farsamo oo jira.
“Arimo farsamo awgood, waxaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan lagu wargelinayaa in mudo todobaad ah kana bilaabata September 14, 2019 ilaa September 21, 2019 la hakiyey qabashada codsiyada baasaboorka.” ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay bogga waaxda socdaalka Soomaaliya ee facebook.
Go’aankaan lagu hakiyay dalbashada baasaboorka mudada todobaadka ah ayaa kusoo aadaya, iyadoo sidaan oo kale horay muddo seddax maalmood ah loo hakiyay howlaha Hey’adda dambi barista booliska Soomaaliya ee CID-da, mudadaas oo maanta ku ekeed.
Hey’adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa hay’adaha ugu musuq maasuqa iyo wax is daba marsiiska badan dalka, ayada oo xaruntaas ay tahay meel lagu dhibo lacag badan oo laaluush ahna looga qaato muwaadiniinta baasaboorka doonaya.
Hakintan cusub ayaa wararka qaar waxay sheegayaan inay ugu wacan tahay musuq maasuqa hay’addan oo xargaha goostay, islamarkaana laga yaabo in baaritaan lagu sameeyo.
Agaasimaha waaxda socdaalka Maxamed Aadan Koofi, oo marar badan la damcay in xilka laga qaado ayaa waxaa hor-istaagay nin ay isku beel yihiin oo saaxib la ah madaxweyne Farmaajo, mana jirto wax laga qaban karo musuq maasuqa hay’adda.
Previous Post: Daawo::Maleeshiyo Faysal Cabdi Bootaan Wato oo Tagtay Deegaano Sanaag Kamid Ah
Next Post: Deg Deg Daawo:Maamulka Khaatumo Oo Ka Hadlay Foolxumada Laascaanood Ka Taagan,